10 yezinhlelo zokusebenza Kuhle kakhulu Saving Money - Izindaba Rule
10 yezinhlelo zokusebenza Kuhle kakhulu Saving Money
Kusukela izaphulelo kuma amakamelo ehhotela amathikithi indiza shopping izaphulelo, amadili umfundi amathikithi gig ngaphandle izimali yokubhuka
Lesi sihloko osesikhundleni “10 izinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu imali” lalotshwa Stuart zivusa, ngoba theguardian.com ngoLwesihlanu 5th February 2016 09.00 UTC
Zonke bahalalise ngale yobudala austerity. Ngisho noma lokho akavele amadivaysi ezibizayo senza sinemali. Kodwa Smartphones kungasindisa imali, uma uzivumela.
Apps kokuqhathanisa amanani ukudla, amathikithi endiza, Umshuwalense nokuningi zaziwa kahle kakhulu kwi ezitolo lokusebenza manje, njengoba kukhona zokusebenza izindlela eziqondile ngaphezulu kuyanisindisa amakhilogremu ambalwa.
Nazi 10 Izinhlelo zokusebenza ukuthi kufanele sisize ushiye isikhwama sakho ozwa khuluphele kancane ekupheleni lwenyanga.
Inani elandayo nabahamba njalo ayaphuma kamuva futhi kamuva nabo ukubhuka amahhotela abo - eqinisweni, kuze kube lusuku zifika emzini. Hotel Tonight kungenye yezindlela ezingcono zokusebenza ukusabalalisa le ndlela yokuziphatha: sizongena izaphulelo for ngomzuzu wokugcina Igumbi ukubhuka. Uma ungumuntu enesibindi, unga isikhwama ezinye amadili emihle.
app British Dice kuyindlela ukuze uhlole oluzayo amakhonsathi omculo and ukuthenga amathikithi, okuyinto zigcinwa ngokuphelele smartphone yakho. Akukona amboze zonke gig, kodwa Ukukhetha ukhethwa ithimba layo wokuhlela, isixuku bands up-and-ozayo. Isici imali esisindisa: ukhokha izimali yokubhuka nhlobo.
Skyscanner iyona lokusebenza esungulwe kakhulu for kokuqhathanisa amanani indiza: indlela esheshayo ukuzuza in ulibangisephi oyifunayo futhi ubone onesifo amathikithi eshibhe. Uhlelo lokusebenza ke uqondisa kusayithi olufanele ukubhuka izindiza yakho, zidayisa elula, ehlunga ngempumelelo ukuze ubilise kuze kube ongakhetha efanele kakhulu.
Lolu hlelo lokusebenza ingenye zokudla, esehlanganise ezingaphezu kuka 7,000 zokudlela emhlabeni UK kuhlanganise amaketanga like Pizza Express and Zizzi. It ugcina nawe kuze kube yimanje izaphulelo kanye ukukhushulwa, kanye nokusiza wena ubone ukuthi iyiphi zokudlela aseduze indawo yakho yamanje, futhi incwadi itafula kusuka kuhlelo lokusebenza.
abafundi e-UK kuphela kudingeka thwebula le app, okuyinto lokubolekwa izaphulelo ahlukahlukene okuxoxiswene by inyunyana umfundi lo NUS. Liphinde inezici indawo-based, ibalazwe okubonisa okuseduze. search Its sici ubuye Ukugunda, nokusiza uthola indlela yakho ngokusebenzisa ezingaphezu kuka 150 izaphulelo partners '.
mySupermarket kufana nokuthi a lokusebenza yezitolo uhlu njengendlela indlela ukuze uthole izaphulelo: ungakwazi ukuyisebenzisa ukuze ungeze imikhiqizo udinga ukuthenga isonto lonke, bese ubeka uphawu zibayise njengoba uhamba phakathi nenkundla bephakamise. Kodwa lokusebenza futhi ugcina amathebhu on amanani ahlukahlukene UK nezitolo ezinkulu, uyakusiza uqhathanisa amanani bese ubona amadili ezintsha njengoba ziya bukhoma.
Ingabe ngaphambili-ukuba zimemezele zokusebenza like Uber imali? Ngezinye izikhathi, nakuba hhayi lapho elidumile "ukwanda" zamanani empeleni. Minicabit ethatha indlela ehlukile: kungcono lokusebenza comparison for taxi futhi mini-cab izinkampani phesheya UK, kokuthola wena ukuzuza imininingwane ngohambo lwakho, ke ayisebenzise icaphuna amafemu ahlukahlukene wendawo. Okwamanje usebenza 40 imizi UK.
umatasa kakhulu ukuba angaqhubeka aliqonde okuningiliziwe ugesi kanye negesi yakho izikweletu? Joyina club. Imitha Kufundvwa kuyinto ithuluzi eliwusizo kakhulu ngempela, inala emagrafu pretty ethungatha ukusetshenziswa yakho kanye nezindleko. Kodwa kungcono izici comparison price ekusindiseni imali: checking other providers’ costs in your area without a salesperson in sight.
What have we missed? Okwashiwo sigaba ivuliwe ngawe ukuthi wabelane ngolwazi lwakho of the zokusebenza ezibalwe ngenhla, kanye nezincomo for zokusebenza imali esisindisa thina ungafakanga.
← Fentanyl: Drug 50 Times Ngini Potent ukwedlula i-heroin Apple Ethi Iphutha iPhone '53′ iwukuba Vikela Amakhasimende’ Security →